Macalinkii Qaranka dhami u ooyey! W/Q: Cismaan Abokor Dubbe
Monday 7th January 2019 14:38:58 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Major Geoffrey Douglas Langlands ayaa geeryooday Arbacadii dhoweyd ee 2da January 2019. Waxaanay geeridiisu ruxday oo kaga ilmaysiisay malaayiin iyo malaayiin qof oo u baroor-diiqay.
Haddaba waa kuma Mayjarkan loo ooyey?
Gaashaanle Geoffrey Langlands waa macalinkii macalimiinta Pakistan, asalkiisu wuxu ahaa Ingiriis wuxu ku dhashay Gobolka Yoksha (Yorkshire) ee Woqooyiga England sanadkii 1917kii, xiligaas oo uu socday dagaalkii koowaad ee Adduunku. Aabihii wuxu dhintay isaga oo sanad jir ah, kaddib hooyadii baa ula soo daaduuntay koonfurta England ee Bristol iyo Somerset, nasiib darro Geoffrey oo 12 jir ah ayay hooyadiina dhimatay. Deriskii xaafadda ayaa ogaaday in wiilkan yar ee agoonka iyo rajayga ahi uu aad ugu fiican yahay tacliinta, sidaa darteed way caawiyeen, waanay kafaalo-qaadeen. Geoffrey wuxu kamid noqday ardaydii ugu sarraysay Dugsiga independent Public school of Somerset, waxaanay loo qaatay macalinimo, isaga oo qaatay tababar macalinimo. 3 sano markii uu macalin ka ahaa dugsiga sare ee Croydon ee koonfurta London, ayuu 1939 kii qarxay dagaalkii Labaad ee Adduunku; isaga oo arrintaas ka hadlaya wuxu yidhi; Markii Hitler jebiyey heshiisyadii oo dhan ee uu ka gudbay Xuduuda Poland waxa dagaal ku dhawaaqay Raisal Wasaarahaygii Chamberlain, markaas baan degdeg isaga xaadiriyey xeryihii ciidamada.
Kaddib Geoffrey waxa loo tababaray askarinimo iyo sarkaalnimo oo iyaduna jaamacad kale ah.
Major Geoffrey Langlands wuxu kamid noqday ciidamada kamaandoosta ingiriiska, waxaanu ka qayb-qaatay dagaaladii ugu adkaa ee lala galay Naazigii Germany. 1944-kiina waxa loo wareejiyey dalweynaha India. Xorriyaddii 1947kii kaddib India waxay u kala go’day laba qaybood, Geoffrey na wuxu doortay in uu la shaqeeyo qaybtii Muslimiinta ee la’ baxday Pakistan. Wuxu tababare u noqday Ciidamadii Pakistan. Markii uu tababarkii ciidamada u dhammeeyey reer Pakistan ayaa 1951 waxa u yeedhay Madaxweynihii Pakistan General Ayub Khan, wuxu ku yidhi Mayjar mar haddii aad tababarkii dhammaysay maxaa kuu qorshaysan marka aad England ku noqoto; Waxan ku laabanayaa buu yidhi shaqadaydii hore ee Macalinimada oo aan aad u jeclaa. Markaas ayuu General Ayub Khan ka codsanayaa Geoffrey in uu Pakistan ba tacliinta ka caawiyo, waanu ka aqbalayaa. Waxaanu macalin ka noqonayaa iskuulka Aitchison oo markii dambe noqday ka ugu fiican dalka Pakistan. 70 sano oo dambe ayuu macalin ahaa. Waxa la sheegaa in mar dalka Pakistan ay soo martay dowlad dhan oo uu inta badan wax soo baray. Madaxweyne, laba Raisal-wasaare, iyo boqolaal Wasiir ayuu macalin u soo noqday. Imran Khan oo hadda ah Prime-Minister-ka Pakistan baa ka mid ah ardaydii Gaashaanle Geoffrey Langlands. 1979-kii ayuu macalinku u guuray gobolka buuraleyda Pakistan ee aan dowladda laga aqoon ee Wazirstan halkaas oo uu ka furay iskuulkii ugu horreeyey, laakiin nasiib-darro waa la’ afduubay naftiisuna halis bay gashay.
Farhat Tamas oo Psychology ka dhiga Jaamacadda Peshawar ayaa ka sheekaynaya maalintii koowaad ee uu bilaabay dugsiga buuraha lama-galayda ku dhex-yaal ee Chitral School. Farhat wuxu leeyahay; Waalidkay may awoodeyn in ay ii gadaan dharkii school Ka, sidaa darteed subaxdii koowaad waxan ku tegey dhar jeexjeexan iyo kabo kala-kaan ah( kala midab ah). Major Langlands baa i soo dhoweeyey wuxu i baray farxadda nolosha. Markii aan shaqada ka helay Jaamacaddan Peshawar baan macmacaan u geeyey macalinkaygii, wuxu u qaybiyey gabdhihii schoolka dhiganayey waxaanu ku yidhi waxan rabaa in mid kasta oo idinka mid ahi maalin maalmaha kamid ah sidan oo kale dugsiga u keento macmacaan.
Major Geoffrey Langlands waxa uu noolaa 101 sanadood oo 90 kamid ah uu halgan nololeed iyo mid bulsheed ku jirey. Wuxu si aan laaxin lahayn ugu hadli jirey luqadaha Urdu-ga, Pashtunka iyo English ka. Waxaanu waxbaray kumanaan iyo kumanaan reer Pakistan ah oo guuleystay noloshana meeqaam sare ka gaadhay. Waana macalinkii soo
saaray saraakiishii ciidanka iyo haldoorkii soyaasadda ee India ay loodin kari weyday.
Ummadda reer Pakistan oo dhan oo uu illaa maalintii ay xoriyadda qaateen ee 1947kii illaa maanta uu u adeegayey hal habeenna aanu ka tegin ayaa maanta u wada ooyeya macalin Major Geoffrey Douglas Langlands
Cismaan Abokor Dubbe
[Daawo:-] Guddida Qandaraasyada Qaranka Oo Daahfuray Siddeed Mashruuc Oo Tartan Loo Galayo.
Xukuumada Somaliland Oo Aan Wali Ka Hadal Xaalada Deeganka Ceel Af-wayn Iyo Shirar Is Daba Jooga Oo 24 Saac Ee U Danbeey
Siyaasi Maxamed Cismaan Oo Madaxweyne Biixi Ugu Baaqay Inuu Tanaasul La Yimaado Fuliyana Heshiiskii Khaatumo.
Guddida Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland Oo Shaacisay Tartan Loo Galayo Dib U Dhiska Dayrka Jeelka Mandheera + [Muuqaa
Gudida Qandaraasyada Qaranka Oo Shaacisay Cidda Ku Guulaysatay Qandaraaska Baaburta + [Muuqaal]
"Boqor Buur-Madow Baa Ciidamadaa Lahaa Baa La Yidhi" Badhasaabka Sanaag Oo Eedeeyay Boqor Cismaan